Kwamungaise mari yangu: sarudzo dzekufunga | Ehupfumi Zvemari
Kwokuisa mari yangu
Encarni Arcoya | | General hupfumi
Paunenge uine mari yakakwana yekufema zviri nyore uye uchiziva kuti, kana chimwe chinhu chikaitika, une mari yekuchigadzirisa, panguva imwechete iwe unogona kubvunzwa kana mari iyoyo yaisazove iri kufamba zviri nani, kuitira kuti ikupe zvinobatsira. Naizvozvo, unogona kuve nemubvunzo mumwe chete mundangariro dzako: Ndekupi kwekudyara mari yangu?
Kufunga nezve kuti chero mhando yemari inounza mabhenefiti nenjodzi, kuita sarudzo kwayo haisi nyaya yehusiku, asi unofanirwa kuyera zvayakanakira nezvayakaipira. Uye zvakare, muzviitiko zvakawanda, kana iwe ukangoisa mari yako, haugone kuibvisa pese paunoda, asi chete kana yagadzwa, izvo zvinokutadzisa kuva nedambudziko nazvo.
1 Invest mari: nei uchizviita
2 Mhinduro kunzvimbo yekudyara mari yangu
2.1 Mari yekudyara
2.4 Yakagadziriswa-term deposits
2.5 Dzimwe sarudzo kwaungaisa mari yako
Invest mari: nei uchizviita
Vazhinji vanopinda munyika yekudyara vachifunga kuti vari kuzowana mari yakawanda uye nekukurumidza. Uye chokwadi ndechekuti hachisi chokwadi. Uye zvakare, inofanirwa kutarisirwa mupfungwa kuti chero kudyara, kunyangwe kwakachengeteka, kunosanganisira njodzi, uye unogona kupererwa nemari yawanga uine. Naizvozvo, nyanzvi dzinogara dzichikurudzira kuti usaise mari yako yese yekuchengetedza, asi chikamu icho chawakasiya uye chausingazodi munguva.
Nekuti kana, Kuisa mari haisi nyaya yekukweretesa mari uye kuidzosera kwauri mangwana, kana vhiki. Dzimwe nguva zvinogona kutora makore, uye bhenefiti yaunowana ishoma, kwete hombe. Iyo poindi ndeyekuti, zvishoma nezvishoma, iyo diki purofiti inoshanduka kuita hombe, asi hazvireve chaizvo kuti kuisa mari kuri kuzokuita iwe mamioneya.
Icho chikonzero nei vazhinji vachifunga iyi sarudzo ndeyekuti mari yakamiswa haina kuzivisa chero bhenefiti, kunyangwe iri masendi mashoma. Uye zvakadaro, kana iwe ukaisa mari, iwe unogona kuva navo. Asi usatarisira chero kurohwa kwerombo rakanaka kana kufunga kuti uchazogamuchira yakawanda mari.
Mukupedzisa: kuisa mari yako mari inogona kuva sarudzo yekukuunzira imwe bhenefiti, asi iwe unofanirwa kungozviita nezvakasara mushure mekuvhara zvaunoda uye kuva ne "cushion" yekukubatsira kugadzirisa chero zvinoitika.
Mhinduro kunzvimbo yekudyara mari yangu
Kana iwe usingaregi kutendeuka musoro uye iwe uchigara uchifunga "kupi kwekudyara mari yangu", saka pano tinokupa iwe dzimwe sarudzo, dzimwe dzakachengeteka kupfuura dzimwe. Zvese zvinoitika, kunyangwe tichikurudzira izvo, Kana iwe usina zano, tanga waedza kuongorora zvakanaka zvaunoda kuita. Zvakare, pese pazvinokwanisika, usaise mari yese yauinayo, asi chikamu chayo chete. Neiyi nzira, iwe unozosiira iwe wega metiresi iyo iwe yaunogona kushandisa nepo imwe chikamu ichifamba kunotaura mabhenefiti.
Iyi ndeimwe yesarudzo ine mukana wekuti inofanirwa kuitwa nehunyanzvi, nekudaro iri rakachengeteka (sekukwanisika). Uye zvakare, zvinoenderana nekuti iwe uri wepakati nepakati, anochengetedza kana ane ngozi investor), ivo vachakupa iwe dzakasiyana mhando dzekudyara mari.
Kurudziro yedu ndeyekuti kumbira usati waita sarudzo, uye kuti unosangana nehunyanzvi anozogadzirisa zvese. Kunyangwe zviyero zveRobo Advisors zvabuda, ari marobhoti ane basa rekugadzirisa zvese nenzira inogadziriswa.
Uye ko homwe yekudyara inosanganisirei? Zvakanaka, zvirinani, ndezve kubatanidza mari yevaiti vanoverengeka kuti vazviise muzvinhu zvakasiyana uye, gare gare, uwane mabhenefiti anoenderana nezvawakapa.
Zvikamu kuchengetedzeka uko makambani anoburitsa kuitira kuti vamwe vagone kuzvitenga uye, nenzira iyi, vanowana mari yekuzvipa mari. Kuchengetedzeka uku kunopa kodzero kuvanhu vavanazvo, nenzira yekuti vagowana kubatsirwa kubva muzvikwereti kana kambani ikafunga kuigovera.
Asi kunyanya mune yekudyara, izvo zvaunoita ndizvo tenga masheya wozoatengesa nemutengo wakakwirira. Neiyi nzira, iwe unowana mari uyezve purofiti nekuti urikutengesa ivo nemari yakawanda kupfuura yavakutengera iwe.
Zvino, kunyangwe ichiita senge yakanaka kwazvo uye kuti iwe unogona kuita mari yakawanda, muchokwadi iri njodzi huru kwazvo yaunotarisana nayo, nekuti iwo masheya anogona kukwira pamwe nekunyura. Mune mamwe mazwi, chinhu chimwe chete icho iwe chaunogona kuwana zvakapetwa icho iwe chawakabhadhara pamasheya; kana kurasikirwa nehafu yemari yako (kana yese).
Iwe unofanirwa kunzwisisa zvisungo sekuchengetedzwa kwechikwereti. Izvi zvinopihwa zvese nemakambani uye neHurumende kana mamwe masangano ekutsvaga mari uye zvavanotendera ndezvekuti muridzi wemabhondi aya anogona kupihwa mhindu yemubhadharo we "kukwereta" iyo mari iyo ma bond anokosha.
Ivo vane mukana we kupa kudzoka kwakakwirira, asi kuri kushoma pane kuri mune masheya. Uye haudi ruzivo rwehunyanzvi.
Pane zvese sarudzo iwe yaunogona kuzvibvunza iwe kumubvunzo "kupi kwekudyara mari yangu", uyu zvimwe ndiye ane njodzi shoma. Asi hazvireve kuti iwe unofanirwa kungo svetukira mukati. Njodzi dziri munyika dzinogona kukonzeresa njodzi zhinji, senge rudzi rwe inflation, kufarira, kushomeka ... Uye kune izvi unofanirwa kuwedzera kuti iyo yakareba iyo nguva yezvisungo, ndiyo ngozi yauri kuita.
Kana iwe usiri kuda kuisa njodzi zvakanyanya, iyi ndiyo sarudzo iyo vazhinji vanosarudza kuve vakachengeteka. Kuti uite izvi, zvaunoita kuenda kubhangi rinokupa iwe kudzoka mukutsinhana nekuchengeta huwandu hwemari yako kwenguva yakati X. Mushure meizvi, unogona kuchaja chimbadzo kana usati wabata mari iyoyo.
Zvino, ko kana uchifanira kuibvisa? Vanobvumira, asi vachibhadhara chirango.
Chinhu chakanaka nezvazvo ndechekuti, Asati agadzira zvese, ivo vanokuudza zvauchazowana. Saka iwe unongofanirwa kutaura kuti yauri kuzosiya yakagadziriswa uye kwenguva yakareba sei kuti uzive kuti yakawanda sei ichakuunzira mabhenefiti. Asi usatarisira kuti vakupe huwandu hwakawanda.
Dzimwe sarudzo kwaungaisa mari yako
Kune dzimwe nzvimbo dzakawanda uye sarudzo dzekudyara mari yako. Kubva real estate, crowfunding, microcredits, kuva ngirozi bhizinesi, kugadzira bhizinesi ...
Sarudzo yekusarudza imwe kana imwe inosanganisira kuve nekuziva kuti njodzi dzekudyara chii uye zvazvinogona kukuunzira. Iwe unofanirwa kuchengeta musoro unotonhorera uye usingafunge zvakakura, nekuti izvo zvinongoisa fungidziro mune chimwe chinhu icho, gare gare, chinogona kupedzisira chave fiasco.
Iwe unokurudzira zvimwe sarudzo uko kwekudyara mari?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Kwokuisa mari yangu
Iwe unoda here chirongwa chezve accounting chekambani yako?
Ndeupi mutemo weVashandi